ယနေ့နောက်ဆုံးရ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားအပြောင်းအရွှေ့နှင့်အခြားသတင်းတိုများ(15.5.19) – Myan Ball
Posted on May 15, 2019 by mb_writer
၁။ ရန်းစ်တောင်ပံကစားသမား အစ္စမာလီယာဆား အားခေါ်ဖို့အာဆင်နယ်နဲ့အပြိုင်လက်စတာကြိုးပမ်း
သိရှိရတဲ့သတင်းတွေအရ အာဆင်နယ်အသင်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ရန်းစ်တောင်ပံကစားသမား အစ္စမာလီယာဆားအား လက်စတာစီးတီးအသင်းကပါ ခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားလာတယ်ဟုသိရသည်။ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် ဆီနီဂေါလက်ရွေးစင်ဆားဟာ ဒီရာသီရန်းစ်အသင်းအတွက် ၄၈ ပွဲကစားထားပေးခဲ့ရာတွင် သွင်းဂိုး ၁၂ ဂိုးနှင့် ဖန်တီးပေးမူ ၁၁ ကြိမ်ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကစားသမားအတွက် တန်ကြေးဟာ ပေါင် ၂၅ သန်းခန့်ရှိနေကြောင်းလည်းသိရသည်။
၂။ ယူနိုက်တက်နဲ့အတူနေဖို့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အားပယ်ချခဲ့ဟု အီဗရာဖွင့်ဟ
ဘောလုံးကစားနေချိန်အတွင်း ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းထံ ပြောင်းခွင့်အား ပယ်ချ၍ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတွင်ဆက်ရှိနေဖို့အား ပတ်ထရစ်အီဗရာက ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တုန်းက ပြောင်းဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့ပေမယ့် ယူနိုက်တက်နဲ့ စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ အီဗရာက Sky Sports သို့ ” ၂၀၀၈ ခုနှစ်ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ကျွန်တော်တို့ ဗိုလ်စွဲနိုင်ခဲ့ချိန်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းဟာလည်း ကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ဟာ ကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းနှင့် ပိုက်ဆံလည်းပိုပေးခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ကနေ မထွက်ခွာဖို့အား ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ် ” ဟုပြောပြသွားခဲ့သည်။
၃။ အက်လက်တီကိုကနေ ထွက်ခွာဖို့အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်သည့် ဂရစ်ဇ်မန်း
အက်လက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းနဲ့အတူ ၅ နှစ်ကြာအတူရှိနေခဲ့ပြီးနောက် အသင်းကနေထွက်ခွာတော့မယ်လို့ အန်တွိုင်နီဂရစ်ဇ်မန်းက အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်ကစားသမားဟာ မနှစ်ရာသီကတည်းက ဘာစီလိုနာအသင်းသို့ပြောင်းဖို့ အရမ်းကိုနီးစပ်ခဲ့ပြီးမှ ပျက်ပြယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Goal သတင်းရဲ့ဖော်ပြမူအရ လာမည့် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင် စာချုပ်ပါအချက်အရ ပေါင် ၁၁၃ သန်းနဲ့ အသင်းကနေထွက်ခွာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ အဲရစ်ဆင် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ထံရောက်လာဖို့ စီနီယာကစားသမားတွေမျှော်လင့်နေ
စပါးကွင်းလယ်လူ ခရစ်တီယန်အဲရစ်ဆင်အား ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒီအပြောင်းအရွှေ့နွေရာသီတွင် အဲရစ်ဆင် ရီးရဲလ်ထံရောက်လာလိ့မ်မယ်လို့ ရီးရဲလ်စီနီယာကစားသမားတွေက ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ သိရှိရတဲ့သတင်းတွေအရ စပါး ဥက္ကဋ္ဌ ဒန်နီယဲလ်လီဗိုင်းက အဲရစ်ဆင်အား ပေါင်သန်း ၂၀၀ ရမှ ထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်လို့ အလေးအနက်ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ အသင်းရဲ့ အောင်မြင်ခဲ့သူ ကွင်းလယ်ကစားသမား လူကာမိုဒရစ်ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့အတွက် အဲရစ်ဆင်ကို ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်က အလိုရှိနေပါတယ်။ အဲရစ်ဆင်ရဲ့ စပါးနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းဟာလည်း နောက်ဆုံးနှစ်ထဲသို့ စတင်ဝင်ရောက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
၅။ အာရွန်မွိုင်းရဲ့ဈေးနှုန်းကိုစုံစမ်းနေသည့် ဆောက်သမ်တန်
ဟတ်ဒါဖီးလ်စ်ကွင်းလယ်လူ အာရွန်မွိုင်းရဲ့ဈေးနှုန်းအား ဆောက်သမ်တန်အသင်းက စုံစမ်းနေကြောင်းသိရပါတယ်။ စိန့်နည်းပြ ဟက်ဆန်ဟတ်ကက နောက်ရာသီတွင်အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်အားမြှင့်တင်ဖို့အတွက် ရှာဖွေမူတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ သြစတြေးလျလက်ရွေးစင်ကစားသမားဟာ အလားအလာရှိတဲ့ပစ်မှတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်းခံနေရခဲ့ရသည်။ The Sun သတင်းအရ ဟက်ဆန်ဟတ်ဟာ ဟတ်ဒါဖီးလ်စ်အသင်းနဲ့ စကားပြောဖို့ အခွင့်အလမ်းအားရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ သိရသည်။ ဒီရာသီတွင် အာရွန်မွိုင်းအား ခေါ်ယူဖို့အတွက် နယူးကာဆယ်အသင်းက ကြိုးစားခဲ့ဖူးသေးပါတယ်။
၆။ အနာဂတ်ဟာ အာဆင်နယ်ရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်လို့ပြောလိုက်သည့် အိုဇေးလ်
အနာဂတ်ဟာ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလက်ထဲတွင် ရှိနေပါတယ်လို့ မီဆွတ်အိုဇေးလ်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ နည်းပြ အူနိုင်းအမ်မရီရဲ့လက်အောက်တွင် အောင်မြင်မူရရှိဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးနောက် ဂျာမန်ကွင်းလယ်လူဟာ ဒီလာမည့်နွေရာသီတွင်အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့အတွက် အလားအလာရှိနေပါတယ်။ ဒါပမေယ့် အိုဇေးလ်က DAZN သို့ ” ထွက်ခွာဖို့အတွက်လား ? ရိုးသားမူအခွင့်အရေးတစ်ခု ဒီလိုမျိုးကိစ္စမှာ ရှိနေတယ်လို့ ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ အာဆင်နယ်နဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းဟာ ၂ နှစ်ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့လက်ထဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အင်းမှာနေရတာကို ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူပျော်ရွှင်ပါတယ် ” ဟုပြောသွားခဲ့သည်။
၇။ အေဂျက်စ်ကြယ်ပွင့်နီးရက်စ်အားခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားနေသည့် ပီအက်စ်ဂျီ
ဘရာဇီးလ်တောင်ပံကစားသမားအား အဲဗာတန်၊ အက်လက်တီကိုမက်ဒရစ်၊ အေစီမီလန် တို့ကစိတ်ဝင်စားနေကြောင်းသိရသည်။ UOL Esporte သတင်းအရ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းဟာ အေဂျက်စ်ကြယ်ပွင့်အား စတင်ဆွဲဆောင်မူတွေပြုလုပ်နေကြောင်းသိရသည်။ ဒီနွေရာသီတွင် နီရက်စ်ဟာ နောက်ထပ်တစ်နေရာပြောင်းဖို့အား အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကာ ကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့အတွက် ပြင်သစ်ကလပ်အသင်းအနေနဲ့ ပေါင် ၄၃ သန်း ခန့်ကုန်ကြဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
၈။ အက်လက်တီကိုမက်ဒရစ်ကွင်းလယ်လူ ရိုဒရီဂိုအားခေါ်ယူဖို့ မန်စီးတီး၊ ဘာကာနှင့်ဘိုင်ယန်တို့ကြိုးစားနေ
အက်လက်တီကိုမက်ဒရစ်ကွင်းလယ်လူ ရိုဒရီဂိုဟာနန်ဒက်စ်အား လက်မှတ်ထိုးခေါ်ယူနိုင်ရန်အတွက် မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းဟာ ဘာစီလိုနာနှင့်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်တို့နဲ့ အပြိုင်ကြိုးစားနေကြောင်း Cadena SER သတင်းအရသိရသည်။ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် ကစားသမားဟာ ဒီရာသီကုန်ရင် ဂရစ်ဇ်မန်းနည်းတူ အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ရိုဒရီဂိုအား ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ဒီကလပ် ၃ သင်းစလုံးဟာ ကစားသမားရဲ့ လျော်ကြေးအတွက် ပေးချေဖို့လိုလားနေကြပါတယ်။
၁။ ရနျးဈတောငျပံကစားသမား အစ်စမာလီယာဆား အားချေါဖို့အာဆငျနယျနဲ့အပွိုငျလကျစတာကွိုးပမျး
သိရှိရတဲ့သတငျးတှအေရ အာဆငျနယျအသငျးချေါယူဖို့ကွိုးစားနတေဲ့ ရနျးဈတောငျပံကစားသမား အစ်စမာလီယာဆားအား လကျစတာစီးတီးအသငျးကပါ ချေါယူဖို့ကွိုးစားလာတယျဟုသိရသညျ။ အသကျ ၂၁ နှဈအရှယျ ဆီနီဂေါလကျရှေးစငျဆားဟာ ဒီရာသီရနျးဈအသငျးအတှကျ ၄၈ ပှဲကစားထားပေးခဲ့ရာတှငျ သှငျးဂိုး ၁၂ ဂိုးနှငျ့ ဖနျတီးပေးမူ ၁၁ ကွိမျပွုလုပျပေးထားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ကစားသမားအတှကျ တနျကွေးဟာ ပေါငျ ၂၅ သနျးခနျ့ရှိနကွေောငျးလညျးသိရသညျ။
၂။ ယူနိုကျတကျနဲ့အတူနဖေို့ ရီးရဲလျမကျဒရဈအားပယျခခြဲ့ဟု အီဗရာဖှငျ့ဟ
ဘောလုံးကစားနခြေိနျအတှငျး ရီးရဲလျမကျဒရဈအသငျးထံ ပွောငျးခှငျ့အား ပယျခြ၍ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးတှငျဆကျရှိနဖေို့အား ပတျထရဈအီဗရာက ဖှငျ့ဟထုတျဖျောပွောဆိုလိုကျပါတယျ။ ၂၀၀၈ ခုနှဈတုနျးက ပွောငျးဖို့အခှငျ့အရေးရခဲ့ပမေယျ့ ယူနိုကျတကျနဲ့ စာခြုပျသဈခြုပျဆိုဖို့အား ရှေးခယျြခဲ့ပါတယျ။ အီဗရာက Sky Sports သို့ ” ၂၀၀၈ ခုနှဈခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ကြှနျတျောတို့ ဗိုလျစှဲနိုငျခဲ့ခြိနျမှာ ကြှနျတေျာ့ရဲ့စာခြုပျသကျတမျးဟာလညျး ကုနျဆုံးတော့မှာဖွဈပါတယျ။ ရီးရဲလျမကျဒရဈဟာ ကွီးမားတဲ့အခှငျ့အလမျးနှငျ့ ပိုကျဆံလညျးပိုပေးခဲ့ပါတယျ။ ယူနိုကျတကျကနေ မထှကျခှာဖို့အား ကြှနျတျောရှေးခယျြခဲ့ပါတယျ ” ဟုပွောပွသှားခဲ့သညျ။
၃။ အကျလကျတီကိုကနေ ထှကျခှာဖို့အတညျပွုလိုကျပွီဖွဈသညျ့ ဂရဈဇျမနျး
အကျလကျတီကိုမကျဒရဈအသငျးနဲ့အတူ ၅ နှဈကွာအတူရှိနခေဲ့ပွီးနောကျ အသငျးကနထှေကျခှာတော့မယျလို့ အနျတှိုငျနီဂရဈဇျမနျးက အတညျပွုခဲ့ပါတယျ။ အသကျ ၂၈ နှဈအရှယျကစားသမားဟာ မနှဈရာသီကတညျးက ဘာစီလိုနာအသငျးသို့ပွောငျးဖို့ အရမျးကိုနီးစပျခဲ့ပွီးမှ ပကျြပွယျသှားခဲ့ပါတယျ။ Goal သတငျးရဲ့ဖျောပွမူအရ လာမညျ့ ဇူလိုငျလ ၁ ရကျနတှေ့ငျ စာခြုပျပါအခကျြအရ ပေါငျ ၁၁၃ သနျးနဲ့ အသငျးကနထှေကျခှာနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
၄။ အဲရဈဆငျ ရီးရဲလျမကျဒရဈထံရောကျလာဖို့ စီနီယာကစားသမားတှမြှေျောလငျ့နေ
စပါးကှငျးလယျလူ ခရဈတီယနျအဲရဈဆငျအား ရီးရဲလျမကျဒရဈကချေါယူဖို့အတှကျကွိုးစားနပေါတယျ။ ဒီအွပောငျးအရှနှေ့ရောသီတှငျ အဲရဈဆငျ ရီးရဲလျထံရောကျလာလိ့မျမယျလို့ ရီးရဲလျစီနီယာကစားသမားတှကေ ယုံကွညျနကွေပါတယျ။ သိရှိရတဲ့သတငျးတှအေရ စပါး ဥက်ကဋ်ဌ ဒနျနီယဲလျလီဗိုငျးက အဲရဈဆငျအား ပေါငျသနျး ၂၀၀ ရမှ ထှကျခှာခှငျ့ပွုမယျလို့ အလေးအနကျဆိုထားခဲ့ပါတယျ။ အသငျးရဲ့ အောငျမွငျခဲ့သူ ကှငျးလယျကစားသမား လူကာမိုဒရဈရဲ့နရောကိုအစားထိုးဖို့အတှကျ အဲရဈဆငျကို ရီးရဲလျမကျဒရဈက အလိုရှိနပေါတယျ။ အဲရဈဆငျရဲ့ စပါးနဲ့စာခြုပျသကျတမျးဟာလညျး နောကျဆုံးနှဈထဲသို့ စတငျဝငျရောကျလာနပွေီဖွဈပါတယျ။
၅။ အာရှနျမှိုငျးရဲ့ဈေးနှုနျးကိုစုံစမျးနသေညျ့ ဆောကျသမျတနျ
ဟတျဒါဖီးလျဈကှငျးလယျလူ အာရှနျမှိုငျးရဲ့ဈေးနှုနျးအား ဆောကျသမျတနျအသငျးက စုံစမျးနကွေောငျးသိရပါတယျ။ စိနျ့နညျးပွ ဟကျဆနျဟတျကက နောကျရာသီတှငျအသငျးရဲ့ ကှငျးလယျအားမွှငျ့တငျဖို့အတှကျ ရှာဖှမေူတှပွေုလုပျနပေါတယျ။ သွစတွေးလလြကျရှေးစငျကစားသမားဟာ အလားအလာရှိတဲ့ပဈမှတျအဖွဈ သတျမှတျထားခွငျးခံနရေခဲ့ရသညျ။ The Sun သတငျးအရ ဟကျဆနျဟတျဟာ ဟတျဒါဖီးလျဈအသငျးနဲ့ စကားပွောဖို့ အခှငျ့အလမျးအားရရှိခဲ့ပွီးဖွဈတယျလို့ သိရသညျ။ ဒီရာသီတှငျ အာရှနျမှိုငျးအား ချေါယူဖို့အတှကျ နယူးကာဆယျအသငျးက ကွိုးစားခဲ့ဖူးသေးပါတယျ။
၆။ အနာဂတျဟာ အာဆငျနယျရဲ့လကျထဲမှာပဲရှိတယျလို့ပွောလိုကျသညျ့ အိုဇေးလျ
အနာဂတျဟာ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ အုပျခြုပျရေးဆိုငျရာလကျထဲတှငျ ရှိနပေါတယျလို့ မီဆှတျအိုဇေးလျက ပွောလိုကျပါတယျ။ နညျးပွ အူနိုငျးအမျမရီရဲ့လကျအောကျတှငျ အောငျမွငျမူရရှိဖို့ရုနျးကနျခဲ့ရပွီးနောကျ ဂြာမနျကှငျးလယျလူဟာ ဒီလာမညျ့နှရောသီတှငျအသငျးကနထှေကျခှာဖို့အတှကျ အလားအလာရှိနပေါတယျ။ ဒါပမယျေ့ အိုဇေးလျက DAZN သို့ ” ထှကျခှာဖို့အတှကျလား ? ရိုးသားမူအခှငျ့အရေးတဈခု ဒီလိုမြိုးကိစ်စမှာ ရှိနတေယျလို့ ကြှနျတျောမထငျပါဘူး။ အာဆငျနယျနဲ့ ကြှနျတေျာ့ရဲ့စာခြုပျသကျတမျးဟာ ၂ နှဈကနျြရှိနပေါသေးတယျ။ ဘာတှဆေကျဖွဈလာမလဲဆိုတာဟာ ကြှနျတေျာ့ရဲ့လကျထဲမှာမဟုတျပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ တှရေ့မှာပါ။ ဒါပမေယျ့ အငျးမှာနရေတာကို ကြှနျတျောဂုဏျယူပြျောရှငျပါတယျ ” ဟုပွောသှားခဲ့သညျ။
၇။ အဂေကျြဈကွယျပှငျ့နီးရကျဈအားချေါယူဖို့ကွိုးစားနသေညျ့ ပီအကျဈဂြီ
ဘရာဇီးလျတောငျပံကစားသမားအား အဲဗာတနျ၊ အကျလကျတီကိုမကျဒရဈ၊ အစေီမီလနျ တို့ကစိတျဝငျစားနကွေောငျးသိရသညျ။ UOL Esporte သတငျးအရ ပီအကျဈဂြီအသငျးဟာ အဂေကျြဈကွယျပှငျ့အား စတငျဆှဲဆောငျမူတှပွေုလုပျနကွေောငျးသိရသညျ။ ဒီနှရောသီတှငျ နီရကျဈဟာ နောကျထပျတဈနရောပွောငျးဖို့အား အဆငျသငျ့ဖွဈနပွေီဖွဈကာ ကစားသမားကိုချေါယူဖို့အတှကျ ပွငျသဈကလပျအသငျးအနနေဲ့ ပေါငျ ၄၃ သနျး ခနျ့ကုနျကွဖှယျရှိနပေါတယျ။
၈။ အကျလကျတီကိုမကျဒရဈကှငျးလယျလူ ရိုဒရီဂိုအားချေါယူဖို့ မနျစီးတီး၊ ဘာကာနှငျ့ဘိုငျယနျတို့ကွိုးစားနေ
အကျလကျတီကိုမကျဒရဈကှငျးလယျလူ ရိုဒရီဂိုဟာနနျဒကျဈအား လကျမှတျထိုးချေါယူနိုငျရနျအတှကျ မနျခကျြစတာစီးတီးအသငျးဟာ ဘာစီလိုနာနှငျ့ဘိုငျယနျမွူးနဈတို့နဲ့ အပွိုငျကွိုးစားနကွေောငျး Cadena SER သတငျးအရသိရသညျ။ အသကျ ၂၂ နှဈအရှယျ ကစားသမားဟာ ဒီရာသီကုနျရငျ ဂရဈဇျမနျးနညျးတူ အသငျးကနထှေကျခှာဖို့ ရှိနပေါတယျ။ ရိုဒရီဂိုအား ချေါယူဖို့ ကွိုးစားနတေဲ့ ဒီကလပျ ၃ သငျးစလုံးဟာ ကစားသမားရဲ့ လြျောကွေးအတှကျ ပေးခဖြေို့လိုလားနကွေပါတယျ။